Google Panda mu Plain Chirungu | Martech Zone
Chitatu, Kukadzi 1, 2012 Douglas Karr
Zvakaoma kutenda kuti tave kuuya pamusoro pegore kubvira Google payakatora iyo inokonzeresa pane yealgorithm gadziriso inonzi Google Panda. Izvo hazvina kuuya zvisina zvimwe kurwadziwa kweGoogle uye, pakupedzisira, mazano eku kupora kubva kuGoogle Panda.
Mushure megore rekubvarura kuburikidza nezvinoonekwa neGoogle semasaiti "spammy", Panda yakakukanganisa sei? Pakave nekumira-kwekumira pakati pevatengesi veInternet uye maSEO nezve nzira yekudzivirira saiti yako kubva kuPanda, asi nezvose zvakagadziriswa uye kudzokororwa kweiyi algorithm shanduko, zvinhu zvinogona kukanganisika nekukurumidza.
Izvi infographic, Google Panda mu Plain Chirungu, inogona kunge iri imwe yeiyo yakajeka infographics yandakaona pane shanduko yeGoogle Panda uye rinotevera rairo kumakambani anofanirwa kutsvaga zvine mutsindo injini dzekutsvagisa matekiniki.
Tags: google pandagoogle panda algorithmgoogle panda kuporagoogle yekutsvaga algorithm